I-Tietinga Suite - Indlu Enomtsalane Enomtsalane - I-Airbnb
I-Tietinga Suite - Indlu Enomtsalane Enomtsalane
Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguRelva
URelva ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uRelva iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ngenxa yeengalo ezivulekileyo kwindalo ephithizelayo, i-Tietinga Suite yacaciswa ngendlela efuna ukunika abantu izinto ezingaqondakaliyo, ezitofotofo, ezamkela kwaye zithandwa ngokupheleleyo ukuze badibane noxolo lwangaphakathi.
Ngaphantsi kwemizuzu eyi-3 uhamba ngeenyawo okanye uhamba ngemoto usuka kwisitrato esiyintloko, i-Tietinga Suite idibanisa izinto onokuzonwabela ezinento yokwenza nendalo kunye nokusondela lula kwilali eyiPenha Heritage. Ndiquke isidlo sethu sakusasa esidumileyo sobugcisa!
Sineendawo zasemaphandleni, sineendawo zokuphumla, ezinebhedi elala abantu ababini, igumbi lokuhlambela elivulekileyo, ii-hammock ezimbini, ikhaphethi evulekileyo enemiqamelo, ibhalkhoni ejongene neentaba, ibhari encinci egcwele iimveliso zobugcisa zengingqi. I-Tietinga Suite ikwabonelela ngendawo esetyenziswa ngumntu wonke eyenzelwe ngokukhethekileyo umngxuma womlilo, nto leyo eyenza kube mnandi ukudibana nesithethe sasekuhlaleni sokubhiyozela ubomi kunye nokudibana nabahlobo abajikeleze umngxuma womlilo.
Ukuhlala kwilali enobubele yasePatrimônio da Penha lithuba elibangela umdla lokuphinda udibane nethemba, ukudibana kwakhona nabantu, ukudibana kwakhona kunye nabantu, ukudibana kwabantu abaninzi kunye nokudityaniswa kwendalo. Ngobomi bemihla ngemihla belali, sihamba kakhulu, sibulisa abantu, sibajonge ngamehlo, sabelana ngamaphupha, sifunda ukuphila kunye nokwahluka kunye nokuququzelela iintlanganiso ukuze sichaze izinto ezinokwenziwa eziqhelekileyo.
Intsapho yeLifa leMveli lasePenha iphawulwe kakhulu bubugcisa bentsapho obuxabisa indalo kunye nobuhlobo obuhambelanayo phakathi kwabo bonke kunye nabo bonke abantu, ukongezelela ekubenikho okunamandla kwenkcubeko. Silungiselela izinto ezininzi zenkcubeko ezifana nee-workshop, izinto onokuzonwabela, imiboniso, imidaniso erawundi kunye nokubhiyozela kakhulu ngomculo nomdaniso xa ukhempisha.
Nanga amagcisa amaninzi avela kuzo zonke iindawo atsala abantu abakhuthazayo ukuba bazibonise ngeendlela ezahlukeneyo. Sidibanisa izinto ezilula noxolo indalo ezisikhuthaza ngamandla amaninzi ukukhuthaza izinto zenkcubeko, abakhenkethi nezixhobo ezijolise ekukhuseleni indawo yokuhlala esihlala kuyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Relva
Sisithethe sokwamkela abantu basePenha Heritage ukuba basebenzisane neendwendwe ngendlela esemagqabini yendalo nobubele. Ukhuthazwa ngumnqweno wokunceda iindwendwe zibe nexesha elimnandi lokunxulumana nendalo kunye nezithethe zasekuhlaleni, ababuki zindwendwe uRelva noLaíssa bafuna ukumema wonke umntu ukuba abhiyozele umlilo, kunye nomdaniso omninzi wokucula kunye nomdaniso osisazinge, ukongezelela ekunikeni yonke inkxaso ekulungiseleleni uhambo lokuhamba kwiindawo zemvelo zalo mmandla.
Ababuki zindwendwe bayafumaneka ukuze baqhagamshelane, bancedwe, baze babuze imibuzo ngefowuni nakumajelo okuncokola.
Sisithethe sokwamkela abantu basePenha Heritage ukuba basebenzisane neendwendwe ngendlela esemagqabini yendalo nobubele. Ukhuthazwa ngumnqweno wokunceda iindwendwe zibe nexesha eli…